အလုပ်အတွက်ဆုတောင်း။ ? ရှာပါ၊ ခေါ်ပါ၊ ခေါ်ပါ
ဆုတောင်းခြင်းများသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာနည်းဗျူဟာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိရသောပြactနာများကိုအဖြေရှာရန်ကူညီသည်။
ဤအထူးဝါကျတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးနိုင်သည်၊ သို့မှသာအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်သည်သာယာသော၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးအကဲများသို့မဟုတ်လက်အောက်ငယ်သားများနှင့်ထိုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ နောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
အရေးကြီးသည့်အချက်မှာအလုပ်သမားပြissuesနာများအတွက်လည်းဖြစ်သည် ပဌနာ ဆုတောင်းခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်း၌လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုအမြဲသတိရပြီး၎င်းအားစွမ်းအားကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။
1.3 ၃ ရက်အတွင်းအလုပ်ရရန်ဆုတောင်းပါ
ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပါ ၎င်းသည်၎င်း၏အင်အားကြီးထွားလာသည်။ သို့မှသာလျှင်အလုံးစုံကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏အဖ၊ ကျွန်ုပ်လမ်းပြ၊ ခွန်အား၊
သင့်အတွက်၊ အရာရာတိုင်းဖြစ်နိုင်ပြီးသင်လုပ်နိုင်သမျှသည်သင်၏ကျေးဇူးတော်သည်အလွန်ကြီးမားပြီးငါ့ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ခွာနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စိတ်သောကရောက်သောအခါ၊
သင်ဟာပေါင်မုန့်ဖြစ်တယ်၊ မှောင်မိုက်၌သင်တို့အလင်းငါ့ကိုလမ်းပြ။ သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဘ၊ ဒူးထောက်လျက်၊ သင်ထံသို့လာပါ၊ ထာဝရကယ်တင်ခြင်းရရန်၊
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့လက်ထဲကဘာမှမကြောက်ရွံ့ရ၊ အကြောင်းမူကား၊ အိုဘုရားသခင်၊
ကျွန်ုပ်၏ချစ်သောယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောအဖေ၊ ကျွန်ုပ်လိုအပ်ရာများကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကိုကူညီထောက်မပါ။ ကျွန်ုပ်အဘ၊
ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့အစီအစဉ်တွေကပြီးပြည့်စုံတယ်၊ ကျွန်ုပ်အလုပ်ကိုတောင်းဆိုရန်ကျွန်ုပ်ထံသို့လာပါ ကျွန်ုပ်၏မိသားစုကိုထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအလုပ်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်း၌ကျွန်ုပ်အားမကျစေကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါ၏။ လက်တော်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ခံစားရမည့်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်စိတ်သက်သာမှုများကိုမခံစားရပါ။ ငါတောင်းပန်ပါ၏၊
မင်္ဂလာရှိသောကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖ။ မင်းမျှော်လင့်ချက်တံခါးတွေဖွင့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သင်၏ကြီးမားလှသောကရုဏာတော်ကြောင့်သင်သည်ငါ့အတွက်လျောက်ပတ်သောအလုပ်တစ်ခုကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်ကိုငါသိ၏။
စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးပါသခင်။ သူ့ကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်သော၊ ကျွန်ုပ်ငွေရေးကြေးရေးအရတည်ထောင်ရန်ကျွန်ုပ်၏တောင်းဆိုချက်ကိုကြားဝင်ပါ။
ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏သခင်။ ကျွန်ုပ်၏မိသားစုအားထောက်ပံ့မှုကင်းမဲ့ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါနှင့်၊ အိမ်တိုင်းတွင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနေထိုင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများအမြဲတမ်းရှိနေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုကောင်းချီးပေးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဆုတောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူတို့၏ဘ ၀ များကိုရိုးရိုးသားသားတောင်းလျှောက်သောဆုတောင်းချက်များသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်လည်းငါတို့ဆုတောင်းတာပေါ့ အလုပ်ကောင်းကြီးပေးဖို့ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျိုးအတွက်ဆုတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအလုပ်ခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မျှဝေသူများအားလုံး၏ကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။
ဤဝါကျတွင်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကောင်းသောစွမ်းအင်နှင့်အပျက်သဘောအတွေးများပါ ၀ င်သောအခြေအနေများကိုသင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်၏သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်၏ချစ်မြတ်နိုးသောယေရှု၊ ကျွန်ုပ်သခင်၊ ကျွန်ုပ်၏သိုးထိန်း၊ ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်ကိုထာဝရခမည်းတော်၏သားတော်အဖြစ်ကိုးကွယ်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ပါ၏။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ရှေ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုနှင့်အတူကြွလာတိုင်း၊ မင်းရဲ့အကူအညီတောင်းတိုင်းမင်းကငါ့ကိုကျေးဇူးတရားတွေ၊ ကောင်းကင်ဘုံကနေကောင်းချီးတွေပေးပြီးမင်းကိုချစ်လို့ပါ။
ထာဝရအလင်း၏အလင်းရောင်ရှိသောယေရှု၊ ကျွန်ုပ်၏ကောင်းသောယေရှု၊ ကျွန်ုပ်၏ချစ်လှစွာသောသခင်၊ သင်၏ကျေးဇူးပြုသူအားကျွန်ုပ်၏လက်ကိုထပ်မံတိုးချဲ့။ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေသောအခါ၊ ငါတို့ကိုမစွန့်ပစ်၊ အစဉ်မပြတ်ငါတို့အနားမှာနေသောသင်တို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုသနား။ ညှဉ်းဆဲခြင်းနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခ၌ငါ့ကိုကူမ။ ငါ့အားသနားခြင်းကရုဏာစိတ်နှင့်ငါ့ကိုကယ်လွှတ်ကြလော့။ ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့အကြားပြိုင်ဘက်ကင်းသောဖျန်ဖြေသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တက်ရောက်ရန်တက်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်၏အသနားခံချက်များကိုသူတင်ဆက်သည်။
သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်၏သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးသောသခင်ယေရှု - ကျွန်ုပ်၌ရှိသောဤကြီးမားသောလိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ရှာဖွေမှုတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရပ်တန့်သွားသော်လည်းကျွန်ုပ်မတွေ့နိုင်ပါ။ ငါ့ကိုမင်းရဲ့မေတ္တာပါကူညီမှုပေးပါရန်တောင်းပန်ပါ၏
သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်၏သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးသောသခင်ယေရှု - ကျွန်ုပ်တံခါးပိတ်ထားသည့်တံခါးအားလုံးကိုသော့ဖွင့်ပြီးကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောကောင်းမွန်သောအလုပ် (သို့) စီးပွားရေးရှိရန်ကူညီပေးပါသည်။ ငါပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုနှုန်းရှိနိုင်ပါသည်။
စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုတည်ငြိမ်အေးဆေးစွာဖြည့်ဆည်းပေးသောသခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်၏အတွင်းစိတ်ခံစားချက်များကိုသက်သာစေတော်မူသောသခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်ချစ်သောသခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤဆိုးရွားလှသည့်အခိုက်အတန့်မှလွတ်မြောက်ခွင့်မပြုပါ။
ဒီမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်းနှင့်ဆင်းရဲချို့တဲ့နေတဲ့ဒီအချိန်မှာငါလုပ်တဲ့အဆင့်တွေဆီကိုလမ်းပြပေးတယ်။ အလုပ်ကောင်းကောင်းရအောင်ရှာပါ။ ငါ့အတွက်တံခါးအားလုံးကိုဖွင့်ပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေ၊ ဇွဲရှိမှုကိုပြသဖို့ဥာဏ်ပညာပေးပြီးအရှုံးမပေးနဲ့။
ကျွန်ုပ်၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်၏အိမ်တွင်အလွန်လိုအပ်နေသောငွေကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးပါ။ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာများကိုကျွန်ုပ်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်၏ကောင်းသောယေရှုကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။
သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်၏သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးသောသခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်အားပေးအပ်ထားသောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ကျွန်ုပ်ပျောက်ဆုံးမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ဥစ္စာရှိသမျှနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းကင်၌အစဉ်အမြဲနေလိုသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ , အစဉ်အမြဲငါအစဉ်အမြဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ဘယ်မှာငါတော့ဘူးသင်တို့နှင့်ကွဲကွာ။
ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်ချင်သောနေရာတွင်ရနိုင်သောအလုပ်တစ်ခုရှိသည်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသော်လည်းထိုအလုပ်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်မှာမဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။
အလုပ်အင်တာဗျူးဝင်တဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး၏အချုပ်အခြာအာဏာရှင်ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့ကိုပထမ ဦး ဆုံးထင်မြင်ချက်ပေးရန်ကျေးဇူးပြုရန်တောင်းခံနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အကြီးအကဲများသည်ဘုရားသခင်အားကြောက်ရွံ့ပြီး ၀ န်ထမ်းများအားနွေးထွေး။ မျှတသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပေးသောအလုပ်တစ်ခု။
ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအလုပ်တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေမည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်အတွက်ဘုရားသခင်အတွက်အရာရာတိုင်းနှင့်အညီအရာရာနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၌ပစ္စည်းများစွာရှိသည့်အတွက်ပျော်ရွှင်စွာအလုပ်လုပ်ရလိမ့်မည်။ el Mundo.
ကျွန်ုပ်၏ပုံသက်သေ၊ အမြဲတည်ကြည်မှု၊ တည်ကြည်မှု၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ တာဝန်ရှိမှုနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပျော်ရွှင်မှုများစွာဖြင့်ပေးကမ်းခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာထာဝရပျော်ရွှင်ခြင်းကိုမျှဝေခြင်း၊ ဒါကြောင့်ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့လုပ်နေတာကများစွာသောလူများ၏အကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။
အာမင်၊ ကျွန်ုပ်၏စကားကိုကြားရပြီး ဖြစ်၍ ပြီးမြောက်အောင်မြင်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏အဖ
၀ န်ထမ်းများရှာဖွေခြင်းနှင့်အလုပ်လျှောက်ထားခြင်းမရှိသည့်နေရာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိခြင်းသည်အဆင့်မြင့်ရဲစွမ်းသတ္တိလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးကိုဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုအခွင့်ကောင်းရှိပါသည်။
La အလုပ်တစ်ခုရှာရန်ဆုတောင်းပဌနာ အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အလုပ်တစ်ခုကိုအလိုအလျောက်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြော်ငြာကိုတွေ့သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့အားအောင်မြင်စွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
အလုပ်တစ်ခုတောင်းဆိုသည့်အချိန်တွင်မည်သည့်နေရာသို့သွားရမည်ကိုသိရန် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအကူအညီကိုတောင်းခံသည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်မှထွက်ခွာသည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လာနိုင်သည့်အထိဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ခြေလှမ်းများကိုညွှန်ကြားနေသည်။
ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ကရုဏာနှင့်အမှန်တရားအောက်၌လျှောက်လှမ်းနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒနှင့်အပေါ်ယံသဘောတရားများကို ဦး မညွှတ်ဘဲနေလိုပါသည်။
အိုအဘ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်းမရှိပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးနှင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌သင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရသည်ကိုကျွန်ုပ်ခံစားရသည်။
မင်းဟာငါ့ကိုအသက်ရှင်တဲ့ရေအရင်းအမြစ်ဖြစ်တယ်။ မင်းရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုငါယုံကြည်တယ်၊ ငါ့ကိုပေးမယ်ဆိုတာငါယုံတယ် အင်အား တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ငါ့ဘဝရဲ့အတက်အကျတွေကိုတွန်းလှန်ဖို့။
အိုဘုရားရှင်၊ ယနေ့အကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုရှာခြင်းငှါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်၏ ၀ ိညာဉ်အားလုံးနှင့်တန်ဖိုး ထား၍ ထိုအလုပ်သို့ပို့ဆောင်ပါ။
ကျွန်ုပ်အတွက်သင်သိုလှောင်ထားသောအလုပ်သစ်တွင်ထိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးဟန်ချက်ညီမှုကိုရှာဖွေရန်ကူညီပါ။ သခင်၊ ကျွန်ုပ်၏စကားကိုနားထောင်ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်ကိုကူညီသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရွက်စာတမ်းများကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ထားပြီးသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါ်ဆိုမှုကိုအတိုဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအချိန်အတွင်းအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးစမ်းသပ်မှုမှာစိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းမရှိဘဲစောင့်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထာဝရမစောင့်နိုင်ပါ၊ သူတို့ကနှစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာသာရရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုစေခြင်းဖြစ်သည်။